I-Corn Palace Cottage - Indawo Enhle
Mitchell, South Dakota, i-United States
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Stacey
Siyakwamukela! Umuzi wethu, owakhiwa ngo-1925, usendaweni yomlando eMitchells yedolobha. Okulandelayo futhi i-Worlds Only Corn Palace, i-Antique Mall, i-Escape Rooms, isitolo sekhofi, isitolo samakhekhe, itiyetha yefilimu nokunye okuningi! Kubandakanya ukupaka ngaphandle komgwaqo izimoto ezi-2. Sithanda ukuhambela umcimbi e-Corn Palace futhi singadingi ukuthola indawo yokupaka. Singahamba nje! NgoJulayi-Septhemba Wed Abalimi Market 4:30-7pm
8/26-30 Umkhosi Wesigodlo Sommbila
1st Friday - Corn Palace inomculo obukhoma wamahhala nokuningi!
Ukuhlala kwakho kunombono omangalisayo weSigodlo Sommbila Kuphela Womhlaba! Kusihlwa ungabuka ama-domes akhanyayo futhi ujabulele ukuphuma kwawo kuvulandi. Ukuhamba ibanga ukuya kuyo yonke imicimbi eCorn Palace kanye nomgwaqo omkhulu wedolobha. Uma ujabulela umlando omncane, izinto zakudala, nokuthintwa kwesimanje uzothola ikhaya lethu lijabulisa. Uzoba nezitebhisi ezi-5 ezibanzi zokungena endlini. Yonke into isezingeni eliphezulu. Sibambe abantu abanokungezwani komzimba nezinto ezingezwani namakhemikhali. Asizisebenzisi izinto eziqabula umoya, amakha anezelwe noma amakhemikhali anokhahlo ngale njongo ekhaya lethu. NgoLwesithathu sisebenzisa ihhovisi elizimele ekhaya kusukela ngo-9-5. Kunenye indawo yehhovisi ekhishini ongayisebenzisa. Sicela uqaphele ukuthi uma uhlala phakathi nesonto, ngoLwesithathu, kungaba othile ehhovisi kusukela 9-5. Sicela ukuphuma ngoLwesithathu kube ngo-9 ekuseni futhi ukungena kusondele ku-5 pm ngoLwesithathu. Sizokwenza kusebenze uma udinga ukungena ngaphambi kwesikhathi. Abantu abangu-5 bazompintshana kakhulu kodwa bazokwazi. 1 umbhede, umbhede ongu-1, 1 usofa, 1 usofa omncane. Igumbi lokuhlala kanye negumbi lokulala kukhulu, kuvulekile uma unesakho sokulala esiphathwayo.
Ikhishi lihlangene kodwa lihlome ngokuphelele.
4.93(98 okushiwo abanye)
Ukuhlala kwakho kunombono omangalisayo weSigodlo Sommbila Kuphela Womhlaba! Hlala ezitebhisini ujabulele . Ukuhamba ibanga ukuya kuyo yonke imicimbi eCorn Palace kanye nemisebenzi yedolobha laseMain Street.
Ngitholakalela izingcingo nemibhalo. Uma unemibuzo sicela ubuze!
Nginosokhaya omuhle ozotholakala nganoma yisiphi isizathu futhi.
Hlola ezinye izinketho ezise- Mitchell namaphethelo